Fianianana Global Voices 0.2 · Global Voices teny Malagasy
Fianianana Global Voices 0.2
Voadika ny 29 Oktobra 2018 20:00 GMT
(Fanamarihana: lahatsoratra Anglisy nivoaka tamin'ny Desambra 2004)
Namoaka dika tsy ovaina an'ilay Teny Ierana Global Voices i SJ, izay novaina anarana ho Fianianana Global Voices (dika 0.2). Inty ilay dika amin'izao:
Mino ny fahalalahana miteny izahay: ny fiarovana ny zo hiteny — ary ny zo hihaino. Mino ny fisian'ny fahalalahana eran-tany hampiasa ireo fitaovam-pitenenana izahay.
Noho izany, te hanome izay rehetra manam-paniriana hiteny ireo fitaovam-pitenenana izahay– ary hanome fitaovana fihainoana kosa ho an'ireo rehetra manam-pikasàna ny hihaino izany lahateny izany.
Miaraka amin'ireo fitaovana vaovao, tsy mila fehezin'ireo mihazona ny enti-manana amin'ny famoahana sy fizaràna vaovao, na ny governemanta izay mety hametra ny fieritreretana sy ny fifandraisana intsony ny fitenenana. Ankehitriny, afaka mihazona ny fahefan'ny gazety ny rehetra. Afaka mizara ny tantarany amin'izao tontolo izao avokoa.
Te hanangana tetezana mampitohy ireo hantsana misy eo amin'ny kolontsaina sy ny teny izay manasaraka ny olona izahay, mba hahafeno kokoa ny fifankahazoan'ny rehetra. Te hanana fiaraha-miasa tsara kokoa izahay, ary te hahery kokoa amin'ny hetsika atao.
Mino ny herin'ny fifandraisana mivantana izahay. Tsy zaraina, miendrika pôlitika ary mahery ny fifandraisana eo amin'olona avy aminà tontolo samy hafa. Mino izahay fa ilaina ny firesahana ivelan'ny sisintany mba hisian'ny hoavy malalaka, anatin'ny rariny, ambinina ary maharitra – ho an'ny olompirenena rehetra eto an-tany.
Raha toa ka sady manohy ny asanay sy ny resakay ihany izahay tsirairay avy, tianay ihany koa anefa ny hamantatra sy hampiroborobo ireo tombontsoa sy tanjona iombonanay. Mianiana izahay fa hanaja, hanampy, hampianatra, hianatra, ary hihaino ny hafa.
Izahay no Feon'izao Tontolo Izao.